Oge oyi na oge opupu ihe ubi na ubi nnwale nke "AGROVOLGA" - akwụkwọ akụkọ "Sistemụ nduku"
Oge oyi na oge opupu ihe ubi na ubi nnwale nke AGROVOLGA
Na Kazan, na July 6-8, ndị ọbịa nke AGROVOLGA 2022 International Agro-Industrial Exhibition ga-enwe ike ịmatakwu nhọrọ ụlọ na nke mba ọzọ kachasị ọhụrụ, onyinye kachasị mma sitere n'aka ndị na-ebubata na ndị na-emepụta fatịlaịza na ngwaahịa nchebe osisi, yana gaa na ogige ngosi nnwale.
A ga-ewepụta ihe karịrị ụdị 220 na-ekwe nkwa na ngwakọ nke ihe ubi (ọka wit, ọka bali, ọka, peas, buckwheat, ọka, sunflower, beets shuga, flax, soybean, rapeseed) nke nhọrọ ụlọ na nke mba ọzọ na saịtị nnwale ọhụrụ. A na-eme nnwale na-eto eto ọnụ na Ministry of Agriculture nke Republic of Tatarstan, Federal State Budgetary Institution "Rosselkhoztsentr", Federal State Budgetary Institution "Gossortkomissiya" na TatNIISH FRC KazNTs.
A ga-adọtakwa uche nke ndị ọrụ ugbo site n'ọhịa nnwale ogologo oge etinyere n'afọ a na ngwakọta ahịhịa nri. Ndị ọrụ ugbo ga-enwe ike iji tụnyere onyinye sitere n'aka ndị nrụpụta dị iche iche wee họrọ ihe kacha mma maka onwe ha. Ndị na-ere ahịa Dialog Trade, Region Korma na Lira Pharm nyere mkpụrụ maka saịtị a.
Ihe karịrị ụlọ ọrụ 30 ga-egosipụta ihe kachasị mma na mpaghara nke ịzụlite, mmepụta fatịlaịza na ngwaahịa nchebe na ubi nnwale. Dịka ọmụmaatụ, onye nkwado izugbe nke ihe ngosi "Ammoniy" na-ahazi nnwale na isiokwu "Ikike nke fatịlaịza nitrogen mmiri mmiri". Ndị ọbịa nke ihe ngosi ahụ ga-enwe ike nyochaa mmetụta nke KAS 32 fatịlaịza na mmepe na mkpụrụ nke sunflower, ọka na rapeseed, yana tụnyere irè ya na mmetụta nke ammonium nitrate, na ndabere ga-abụ mgbagwoju anya fatịlaịza - diammophoska.
Onye nkwado nke ngalaba "mmepụta ihe ubi" - ụlọ ọrụ "August" - ga-enye ihe ngwọta nke oge a na-echebe ihe ọkụkụ site na ọrịa, ahịhịa na pests.
PhosAgro-Region, netwọk nkesa fatịlaịza ịnweta fatịlaịza Russia kachasị ukwuu, onye na-akwado mmemme azụmaahịa AGROVOLGA 2022, ga-egosipụta sistemu nri na-edozi ahụ na mpaghara nnwale ngosi. PhosAgro-Region ga-eweta ụdị ihe ọkụkụ a na-enwetụbeghị ụdị ya na ebe ndị na-anya ụgbọelu: ọka wit, ọka bali, ọka, peas, ọka, flax mmanụ na sunflower.
Tags: "AgroVolga 2022"Republic nke Tatarstan
Ntughari oria ojoo